Ntanetị ịntanetị, ohere dị ukwuu | ECommerce ozi ọma
Ihe nka na ntanetị, ohere dị ukwuu
O doro anya na ụfọdụ ngwaahịa ndị kachasị ewu ewu taa bụ ndị omenkàMa ọ bụ nri, ọla, ngwa, wdg. Nhọrọ ndị e gosipụtara ụdị ngwaahịa a ka ukwuu, na otu n'ime ụzọ klaasị ngwaahịa a nka nka eruola ọtụtụ mmadụ aka azụmahịa igwe Ma nke a bụ ohere anyị nwere ike iji mee nke ọma na ntanetị anyị.
Ọtụtụ ndị ọchụnta ego nwere n'uche nke ahụ achụmnta ego mmadụ, nke a na-eme n'ụzọ na-erite ụfọdụ uru otu ngwangwa. N'ụzọ dị otú a, enwere ike ịsị na mpaghara ohere sara mbara, ebe nke a emeela na enwere ọtụtụ ndị na-emepụta ejiri ngwaahịa, na ubi buru ibu nke ndi ahia ndi huru udiri ahia a.
Ya mere iji jiri ohere a mee ihe, ihe mbụ anyị ga - eme bụ ịchọpụta ihe niche market na anyị chọrọ ikpuchi, nwere ike ịbụ ụfọdụ okwu dịka ngwa, ngwaahịa ịchọ mma n'etiti ọtụtụ ndị ọzọ. Mgbe nke ahụ gasịrị, anyị ga-achọ maka ndị na-eweta ngwaahịa dị otú ahụ; Enwere ụfọdụ katalọgụ dị n'ịntanetị nwere ọdịnaya dịka kọntaktị nke ọtụtụ ụlọ ọrụ ndị raara nye imepụta ngwaahịa ndị a.
Ozugbo anyị matara ma ndị ahịa ahụ na ndị na-ebubata anyị, ihe na - esochi bụ ịzụlite ikpo okwu nke onye ahịa nwere ike ịnụ ụtọ ahụmịhe ịzụ ahịa na-eme ya. Cheta ụlọ ahịa anyị, n'ụzọ dị otú a anyị ga-eme njigide ndị ahịa, na oge ọzọ ha chọrọ ịzụta ngwaahịa na katalọgụ anyị, ha ga-ewere anyị dị ka nhọrọ mbụ.
Ọ dịkwa ezigbo mkpa tụlee oghere nke mere na ndị ahịa anyị nwere ike ikwupụta ahụmịhe ọma ha na ihe anyị nwere ike melite nke ọma. Nke a ga - enyere anyị aka ịmata ma anyị nwere ike ma tinye ngwaahịa na katalọgụ anyị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » Marketing » Ahịa ahia » Ihe nka na ntanetị, ohere dị ukwuu
Ahụmịhe ndị ahịa mgbe ịzụrụ
Ahụmahụ na nhọrọ bụ ihe nzuzo nke ihe ịga nke ọma n'ịntanetị